Miaro ny Zon’ny Mpianatra ny Fitsarana Ambony any Tanzania
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tsonga Zoloa
17 SEPTAMBRA 2013
DAR ES-SALAAM, any Tanzania—Mpianatra 127 tany amin’ny sekoly tao Mbeya no noroahina na nosaziana satria tsy nanaiky hanao hiram-pirenena, noho ny feon’ny fieritreretany. Samy nilaza àry ny tao amin’ny Fitsarana Ambony, izany hoe ny fitsarana ambaratonga ambony indrindra any Tanzania, fa tsy nohajaina ny zon’ireo mpianatra ireo. Tamin’ny 12 Jolay 2013 izany didim-pitsarana izany no nivoaka.
Noroahin’ny sekoly tao Shikula ny mpianatra Vavolombelon’i Jehovah dimy tamin’ny 2007, satria tsy nety nanao hiram-pirenena. Nosaziana koa ny tanora Vavolombelona 122 nianatra tany amin’ny sekoly fanabeazana fototra sy ambaratonga faharoa tany amin’io faritra io satria tsy nety nanao hiram-pirenena. Nitaraina tany amin’ny manam-pahefana momba ny fampianarana sy tany amin’ny praiminisitra ireo mpianatra 127 ireo nefa tsy nahazo rariny. Nampakarin’izy ireo tany amin’ny Fitsarana Avo tao Tanzania ilay raharaha avy eo. Fitsarana ambany kokoa, manarakaraka ny Fitsarana Ambony izy io. Nomba an’ilay fandroahana anefa ilay Fitsarana Avo na dia tsy ny mpitsara rehetra tao aza no niombon-kevitra tamin’izany. Nampakarin’ireo mpianatra ireo tany amin’ny Fitsarana Ambony àry ilay raharaha, tamin’ny 2 Desambra 2010. “Nitsipaka” sy nanafoana ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Fitsarana Avo ny didim-pitsarana navoakan’ilay Fitsarana Ambony.
Hoy i Zadok Mwaipwisi, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any Tanzania: “Faly izahay noho iny didim-pitsarana iny ary hita hoe nanaja ny feon’ny fieritreretan’ireo tanora ireo ilay izy. Vao mainka hita tamin’iny fandresena iny fa tsy ny Vavolombelon’i Jehovah ihany no manan-jo hanaraka ny fivavahana tiany, fa ny olom-pirenen’i Tanzania rehetra mihitsy.”